Yini iqiniso ngokubulawa kukaDerk Wstersum futhi kusho ukuthini lokho 'ngofakazi bomqhele'? : UMartin Vrijland
Yini iqiniso ngokubulawa kukaDerk Wstersum futhi kusho ukuthini lokho 'ngofakazi bomqhele'?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-18 Septemba 2019	• 26 Amazwana
In lesi sihloko Ngichaze ukuthi ukuthunjwa kukaWillem Holleeder Heineken kanye nokubulawa kwakhe akwenza kungenzeka ukuthi ngabe ngamaPsychOps okwamele alungiselele umthetho ngomgomo 'wofakazi basemqhele'. Ukulungiswa kofakazi ngomqhele (okulethwe yiHolleeder PsyOp?) Kusho ukuthi umbuso ungashushisa noma ngubani omfunayo, ngoba lowo msakazi ofaka umqhele kungenzeka angaziwa (ngenqubo "engaziwa efakwe engozini"). Lokhu kuhlaselwa kwe- "Derk Wiresum" kungaqinisekisa ukuthi ummeli ozivikele kusukela manje angasebenza ngokungazi noma angenele uhlelo lokuvikela. Lapho-ke ungaba ufakazi womqhele ongaziwa, ovikelwe ngummeli ongaziwa onobufakazi obuqandayo bokugwetshwa. Ngamafuphi: umbuso ungathola wonke umuntu ngemuva kwamabha ngaphandle kobufakazi.
Lokho mhlawumbe ukufingqa okufushane kakhulu, kepha kwesinye isikhathi isilo kufanele nje ukuba sibizwe ngegama. Phambilini namhlanje, emugqeni wami wesikhathi we-Facebook, ngike ngazibuza ukuthi ngabe uDirk Wiersum ukhona ngempela noma uma kungenzeka ukuthi sibhekene nomlingiswa ojulile. Ngaphezu kwalokho, omakhelwane nabantu obajwayele kufanele bafakwe ku-teknoloji efanayo (unamathisele ubuso obudalwe nge-AI ngaphezulu kokuqoshwa ngesikhathi sangempela futhi bahlanganise umlando kanye namaphrofayela ezokuxhumana nabantu adalwe nge-deepfake). Ngabe ucabanga ukuthi lokho kuzokude kakhulu? Ngiyakuqonda lokho, kepha lobu buchwepheshe buhamba buqhamuke nakho konke esikubona esithombeni nakumsindo kuvela kwabezindaba futhi leyo midiya isezandleni zabantu abanjengoJohn de Mol (bilioneire, umnikazi we-ANP noTalpa). Leyo midiya inazo zonke izindlela zokusebenzisa izindaba ezingezona ezingamanga. Impela abukho ubufakazi balokho. Noma kunjalo, ngicela ufunde lesi sihloko ngokufanayo ukuthola lokho okungenzeka.
Vele, izimpendulo zemidiya yezenhlalo nazo zingahanjiswa yimizwelo ngazo zonke izinhlobo (zangempela noma zokujula?) Amaphrofayli aphendula ngamazwana anjengokuthi: "Ukusho into enjengale iyahlukumeza abashonelwe". Kuyamangalisa impela ukwenqaba ukuthi umuntu ufile uma kunobufakazi obuqinile. Bekungaba kubi kakhulu ukube ngabe besikade sikusebenzisa amashumi eminyaka I-PsyOps idlaliwe babe. Engikwenzayo ukukhulisa amathuba, ngaphandle kokuthatha isikhundla sokuthi lokhu kunjalo.
Kunoma ikuphi, leli cala lingalingana ngokuphelele Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo ubukhulu, lapho inkinga eyakheke khona kanye nempendulo edonswa, kuholela ekubizweni komthetho onzima. Ukuthi lo mthetho onamandla ungabathinta abantu abafanayo ababefuna ukuthi esikhathini esizayo ukhohlwe ngokushesha kuwo wonke umzwelo nokuxokozela. Uma umbuso ufuna ngempela ukuthola wonke umuntu ophikisana naye ngemigoqo, umuntu ongeyena ("umfakazi ongaziwa") anganikeza isitatimende sofakazi esinqumayo (bona icala likaHellleeder maqondana nomsakazi wokunquma umqhele). Ummeli ovikela akudingeki ukuba abe khona (ngoba kungahle kungaziwa esikhathini esizayo) futhi ngakho-ke wonke umuntu angagcina esevaliwe. Noma imuphi umuntu ophikisana nombuso angaba odokotela bengqondo noma avale icala ngecala elingamanga.
Njengoba i-icing e-dessert kungahle kube nomthetho owenza ukuhlaselwa kube khona. Ngemuva kwalokho, kumele sizihlanze ngokushesha zonke izikhali ezingaphansi kombhede kuzo zonke lezo zindlu e-Amsterdam! Lokhu kungenzeka futhi kungenzeka kungabe kusaba njalo!
Yini iqiniso ngokuhlaselwa nokufa ngenxa yokuhamba ngezinyawo komuntu e-Assen?
Ubufakazi bokuthi uGerald Roethof ubonakala engummeli we-PsyOp esecaleni likaJos Brech
U-Anja Schaap utholakale efile olwandle ngomkhumbi waseJalimane? Ingabe lokho kungenzeka ngokusho kwemithetho yemvelo?
I-spin elandelayo ku-Nicky Verstappen - Jos Brech psyop? Izithombe ezingcolile zobulili ezitholakalayo!
Amathegi: advocaat, I-Derk Wiresma, I-Derk Wiersum, ukufa, afakiwe, inkulumo yabezindaba, ukuzama kokubulala, wabulawa
18 September 2019 ku-21: 51
Uma ungazange ulandele izehlakalo zangaphambilini (ze-Fake) uzobe ukholwa yizindaba zanamuhla i-18 Sept 2019 futhi.
Ukugwinya kwe-Hap, ngomumo, ngakho-ke kufanele ulandele izindaba (ezingezikhohlisi) ngoba uma kungenjalo ngeke uqonde izinyathelo noma imiphumela yezindaba ze- (fake).
18 September 2019 ku-21: 53
Abantu nezingane babuye bathi,
Ungasukuma kanjani ngemuva kwamahora ambalwa bese uthi lokho kuhlobene nomsebenzi wakhe, ngenkathi kungekho lutho olusaphenywa?
Igumbi lesibili lingasho kanjani ukuthi ngokushesha, noma kwenziwe ucwaningo lwe-zero.
Kungani singezwa nge-CPR
Akekho ovukile kuma-ambulensi futhi lalikuphi iqembu lokuhlukumezeka. Cha, babekhona?
Kwakungenzeka kanjani ukuthi umakhelwane angazwakali ukuqhuma ngenkathi umfana ezansi nomgwaqo etshela izindaba zentsha ukuthi uvuswe yizinsimbi.
Ngabe ukuthola kanjani ekhanda lakho ukuveza izingane ezinje, ngabe abazali bazisiwe?
Futhi makhelwane kwenzeka kanjani ukuthi awuzwanga isibhamu.
Ungasho vele ukuthi indawo inuka kancane ...
Umfana omncane wavuka bang, imigwaqo kude
Umakhelwane akezwa lutho ??
18 September 2019 ku-22: 28
Ngobuchwepheshe obukhulu obukhulu ungafaka ifilimu indoda enengane emahlombe bese ubeka ubuso obungekho (kodwa obunengqondo) phezu kwayo (kufaka phakathi izwi eliguquliwe).
18 September 2019 ku-22: 57
Ukulengiswa kwemilenze kuletha ingqondo kwimodi yokwamukela (i-NLP hypnosis)
19 September 2019 ku-00: 32
Bona lapha ukuthi le ndlela isebenza kanjani:
19 September 2019 ku-08: 19
Impela, ividiyo yalowo makhelwane nayo iseseyinduna futhi.
Ukuchazwa okuncane, kepha bese kuya phambili.
Indoda ngemuva ingekho nalesisisu esikhulu ihamba ibuyela emuva; khona-ke isithunzi silungile futhi futhi hhayi futhi, kwesinye isikhathi isithunzi simane singabikho.
Umakhelwane uqobo; bheka ukunyakaza okungekhona okwemvelo kwamashiya
futhi okubizwa ngokuthi empompini esweni. Inkohliso!
Kudutshulwe i-backlight isebenzisa i-lens-flare effect, ha ha, imfuhlumfuhlu eshibhile ngoba lokho kusho ukuthi ukukhanya akuhambisani nejakhethi yomfana okufanele agcine ikhanda lomakhelwane ethunzini.
Ukwehla okuvukile ngemuva kufanele kube ngamatshe aboniswa yilanga.
Isithunzi saleyo veni odongeni sinekona elingalungile uma uliqhathanisa nesithunzi salelo zibani.
Isithombe sonke sobuso sibumbabala kakhulu, sinamahloni nje ngamagama, i-AT5 inamakhamera aphezulu, kepha hhayi njengamanje, ha ha, ubukeka Fake kakhulu.
Vele awukuboni lokho ku-smartphone, kepha uyakubona lokho kwi-laptop yokuqala enhle uma usondeza kancane.
18 September 2019 ku-21: 55
Lalela umsakazi. UHiddema ubuzwa okuthile, abezindaba sebevele banayo impendulo.
Oxoxwa naye uthi: "Kungenzeka ukuthi ummeli owasekela ufakazi womqhele angayela esiqhingini esingamisiwe impilo yakhe yonke."
Ngakho-ke kuvunyelwe ukungaziwa, abezindaba bebevele benqume ukuthi umlingisi uHiddema, ngokusho kwakhe, weqa ukuphuma emdansweni (njengoba asho ngemuva kwalokho ezingxoxweni) kufanele anikine ikhanda ephuma kuThe Hague, njengenkukhu egunyaziwe.
18 September 2019 ku-22: 27
Ah yebo futhi okunye okuzayo:
"Simenywe ukuthi singazisebenzisi ngokwethu."
Kungekudala ‘ukuzenza ngokwakho’ nakho kungaholela ekujezisweni.
UPatricia van Oosten wabhala:
19 September 2019 ku-08: 41
I-Idd leyo fakazi naleya ngane manje nayo ingenza ngingabaze. Ilahla yonke imizwa yangempela. Lowo mnumzane ovela 'kubuciko bokwenza misdirection' ividiyo oyabelana ngayo luhlobo olusha lwama-psychophytes aluthola lumnandi ngendlela emangalisayo ukuthi izindimbane ngeke zisakwazi ukuhambisana nobuchwepheshe ngakho-ke zizokopishwa njalo. Imvamisa kusuka kulelo kilabhu elilodwa labathandi bomqondo wesobunxele abake bahlukunyezwa uhlobo oluthile lwamasiko ngosuku lwe-8e ngemuva kokuzalwa.
IHiddema (kanye neWikipma) nayo ibukeka sengathi iyakhathaza ngalokhu. Sekuyisikhathi eside kucace kimi ukuthi iHiddema kumele iholele abantu (kanye nephalamende) esifundazweni samaphoyisa, lapho nje amaqiniso okuthiwa akhomba okuthile, yonke into izobizwa ngokuthi 'yisigebengu' bese kuthiwe ayikho emthethweni. Ukuthi lokho kukwiBaudet noma uVan Otten, akanendaba. Ngeshwa, angiqondi ukuthi angamane aphucule imvelo ye-moccro ngaphezulu kwekamu, 'bonke' isibhamu ngaphansi kombhede wabo, konke kuyi-IQ ephansi, ubuhle bami empeleni inhloso yami ukuthi ekugcineni siqale leyo mpi AmaSulumane, ngokusobala awakwazi ukulinda nge-NWO yawo nesikhungo sakwa-Israyeli.
Iphansi eliphansi kakhulu. Ukudideka konke.
19 September 2019 ku-13: 06
Ngabe iMocro Mafia ikhona ngempela noma ingabe ingabaqeqeshi abambalwa abaqeqeshwe kahle be-AIVD abavunyelwe ukudlala iMocro Mafia?
19 September 2019 ku-14: 03
Kuyenziwa umzamo omncane ukufihla iqiniso lokuthi uMadurodam uyisifundazwe samaphoyisa, kufihliwe akuselona igama elilungile. UJunta useqala ukusondela, ummeli ongaziwa, ijaji elingaziwa ... ukugwetshwa okwenziwe ngomumo
19 September 2019 ku-16: 55
Ukukhiqizwa okuhle kwe-Johnf .. kodwa iphepha kulezo zihlanganisi libukeka liliyintombi nto impela. Lokhu akukaze kubhekwe. Ukukhiqizwa okuhle kwamafilimu ..
19 September 2019 ku-17: 24
Ukuze kube lula, sikhohlwa ukuthi lezi zinhlobo zemikhiqizo ye-Hegelian ziyisikhuthazo sokuvikela noma sokuncenga abanolwazi bombuso, ummeli / intatheli / ufakazi womqhele kangcono kakhulu. Ukubuyiselwa kwemali ngokwezimali kumkhokhi wentela kubuye kube ngumshayeli obalulekile lapha. Amanga ayabusa
20 September 2019 ku-07: 25
Okokuqala saba ne-Holleeder mafia; manje sine-Mocro noma i-nacromaffia ene-Ridouan Taghi. Bobabili bangama-pawns we-AIVD PsyOp ngokusobala abavunyelwe ukudlala indima yabo ku-mafia fake. Konke kufanelekile ukusebenzisa izinyathelo ezintsha zombuso wamaphoyisa. Ukuhlaselwa kwesakhiwo seTelegraaf bekungemanga; Ukuhlaselwa kwesakhiwo sePanorama bekungamanga. Konke kunamanga. Imithombo yezindaba eyimbumbulu yabezindaba ngokubambisana nabezomthetho. Ungangeni engadini! Kungumdlalo onenkinga, ukusabela, nowokuxazulula okuvela kuhulumeni ukusabalalisa isimo samaphoyisa ngesinyathelo ngesinyathelo!
20 September 2019 ku-09: 41
Futhi yebo, kubheke
Karel Reuterz wabhala:
20 September 2019 ku-09: 26
Ngibonga kakhulu ngalo mbhalo ocacile.
Umuntu mhlawumbe uthola ukuthi lo mbono uyiqiniso.
Kepha ngezincazelo zakho nokuchaziwe komlando ngithola udaba lwakho
kuzwakala kukholiseka kakhudlwana kunemidiya eyaziwayo
Ingabe zikhona ezinye iziteshi ku-inthanethi ezabelana ngombono wakho? Lokhu kufanele kube negciwane ngombono wami.
20 September 2019 ku-14: 14
Cha, azikho ezinye iziteshi.
Yonke imidiya ehlukile ihlolwa kude. Isibonelo, i-Niburu.co iqhutshwa yisithandwa sakudala esivela kuFreddy Heiniken. Ngakho-ke ngeke abhale ukuthi ukuthunjwa bekungumbumbulu.
Imidiya ehlukile elawulwayo izama ukugcina ukugxila ku-911; bhala ngama-ufos njll njalo ukhuluma kuphela ngamafulegi awayo (ahlukile kwi-PsyOp hoax).
21 September 2019 ku-16: 56
Ngabe uGrapperhaus ukhuluma iqiniso?
Kulesi siza kukhonjiswe kaninginingi ukuthi ukuhlaselwa kwesakhiwo seTelegraaf esiseBasis weg bekungeyamanga nokuthi kanti ukuhlaselwa kwesakhiwo sePanorama nakho kuyinkinga enkulu. I-anti-tank grenade eshiya umonakalo omkhulu kakhulu kunomonakalo okhonjisiwe futhi ukhona.
Uma zonke lezo zigilamkhuba (okuthiwa zibizwa) zihambisana nalokhu (ngokuhlaselwa okuyi-Fake) ungasho ukuthi uGrapperhaus akazange awenze kahle umsebenzi wabo wesikole futhi uParool akazange akuqinisekise okuvelile ku-imeyili yabo. Basho nje okuthile futhi benza okuthile futhi nathi kudingeka sibathathe ngokungathi sína labo bantu.
Futhi kungani le ndatshana ingasabiwa, inkululeko yokuveza imizwa iqothulwe ngokuphelele ngamadoda anenhlamba njengoJohn der Heuvel, kumele abe namahloni ngaye uqobo, BAH!
21 September 2019 ku-17: 44
I-Grapperhaus imatasa nezinye izinto ..
21 September 2019 ku-17: 09
Isimo sezulu esishayayo nge-mega hoax yokuthi banesifiso esikhulu kumenzi wobubi kunalowo ohlukunyeziwe (ayikho enye indlela ngoba uma kuyiqiniso)
Futhi namanje akukho neyodwa inkomba enikezwe igunya elibizwa ngamaphoyisa, konke ukuqagela
21 September 2019 ku-17: 47
mhlawumbe uVenJ no-OM bathole izeluleko ezithile ezivela emndenini we-zorregieta. Ubufakazi obengeziwe bokuthi yonke le nto ihleliwe nokuthi abantu ababekezelwanga, besaba ukuthi leli cala lizodalulwa ukuthi liyini i-psyop yomthetho omusha. Ihlanya kanjani i-grapperhaus ngokushesha engakathulwanga 🙂
24 September 2019 ku-15: 01
i-pablo escobar ayivunyelwe ukubopha imichilo ye-tagi ~ (uma isivele ikhona), umdlali oyedwa ngemuva komunye. Umbukiso onjani, ungabiza kancane!
24 September 2019 ku-20: 33
Izinqumo ezinkulu ezinje, njengokuhlasela kohlelo lwezobulungiswa, zibukela phansi ukubuswa komthetho njalonjalo
kanti akekho owephuliwe owatholakala enecala, engatholakali, umsolwa, enganalutho futhi engasho lutho.
Isisusa esigxekwe yiMediya, ukuhlolwa ngezithombe ezintathu kuphela zesisulu, kube ne-1 kuphela yevidiyo yesisulu.
Uphi umndeni wommeli, yonke le ndaba ibeka abezindaba engcupheni ngenxa yezisusa
ukukhulisa amandla angamashumi amathathu nantathu ngaphandle kokuthola inkomba kumqangi.
Baphi abameli ku-NL bafuna lo mbuzo ocindezelayo, uphi umthetho!
28 September 2019 ku-17: 31
Kungekudala ngemuva kwalesi sigameko, kwabhalwa i-inthanethi lapho umakhelwane athi i-alamu yakhe ihambele i-07: 33, ngemuva kwalokho wezwa ukuqhuma ...
Abantu abasebenzisa iphilisi elilodwa kufanele nabo baphathwe ngokusho kwe-Grapperhaus. Kakhulu ngenqubomgomo yokubekezelela amaDashi… ..
Sekuqokwe ummeli omusha, ozohlala engaziwa. Amajaji nabashushisi nabo bangahlala bengaziwa ngokuzayo. Uma umuntu kufanele athuliswe umlomo, konke okumele bakwenze ukudala usongo lokuzama lowo muntu enkantolo engaziwa enkantolo futhi abaphonse ejele ...
8 Okthoba 2019 ku-19: 18
Oh yebo kuphuze okuthandekayo ku-Rode Hoed futhi sibe nengxoxo nabahluleli nabameli kanye nabashushisi kanye namanye ama-gown, siyasazi
Lesi simangalo sibonisa ukuthi imali ikhokhisiwe, kusho ukuthi: "Lokho u-9 / 11 ku-2001 abekusho ngokuhleleka komhlaba, uphawu olunjalo ukubulawa kommeli ngenxa yokusebenza kwakhe emsebenzini wezomthetho waseDashi",
8 November 2019 ku-00: 14
Futhi, bheka lapha ephephandabeni leNetherlands elisakazayo ukuthi le ncwadi kungenzeka / ishicilelwe.
Noma ngabe le ncwadi mhlawumbe ingephakamise iveyili ize iphelele ezinganekwaneni, isho umbono ophelele.
Akufanele yini silinde iminyaka embalwa kuze kube yilapho abantu abacatshangelwe kahle abaziyo ngokuthumba okungelona iqiniso sebunqunyelwe, futhi yilapho kuphela lapho bezokhipha khona isimemezelo se-HOAX HEINEKEn,
U-HEINEKEN AKASEKe athunjiwe EBUZA UKUZE AKHATHELULE
« Ingabe kuzoba nempi phakathi kwe-US ne-Iran ngokushesha okukhulu manje?
Inkulumo ka-Greta Thunberg UN ikhumbuza 'izingane eziphonswe ngaphandle kwe-incubators' empini yase-Iraq »
Ukuvakashelwa okuphelele: 13.947.165